Tababar Qalabka Korantada Dual - GO! SPECTRUM SCHOOL (DUAAL // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
CIYAARAHA KORONTADA DUAL
spectrum School > koorsooyinka our > dual Learning > Qalabka korontada Dual
ah Tababarka BSO Tababarka Korantada Dual baro in lagu rakibo qalabka cusub ee korontada guryaha iyo dhismayaasha. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale dib u cusbooneysiin kartaa iyo dayactir kartaa qalabyada jira. Waxa kale oo aad baran doontaa inaad ka shaqeyso goobo badan oo degaan iyo / ama qalab koronto.
Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay ay kooxahaasi 6:
Xidhiidhka xoogga yar ee hooseeya
Tabobarkan wuxuu ka bilaabmaa sanadka 5e.
Maxaad u baahan tahay inaad bilowdo?
Si aad u bilowdo Qalabka Korantada Dual waa inaad noqotaa qof haysta shahaadada 2e ee waxbarashada dugsiga sare, ama go'aanka wanaagsan ee golaha fasalka.
mid ka mid No talaabo karaa laba barnaamij (iyada oo qayb goobta shaqada) isagoo waqti-buuxa ah waxbarashada khasabka ah, maxaa yeelay waxa ay si sharci ah aan macquul ahayn waxaa loogu talagalay waqti-buuxa ah waxbarashada qasabka ah inay soo galaan suuqa shaqada. Waxaad dhiganeysaa dugsi buuxa oo dhan ilaa 16. Haddii aad tahay 15 sano waa in ay gaari ugu yaraan 2 sano ee ugu horreysa ee waxbarashada dugsiga sare.
Kadib Kormeeraha korantada ee korantada waad heleysaa shahaadada waxbarashada dugsiga sare. Hase yeeshee, waad haysataa ma ahan diblooma waxbarasho sare. Sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa inaad haysato mid 7e sannadka khaaska ah in la raaco. Dugsigeena waxaad ku takhasusi kartaa barashada farsamada Korontada Shaqaalaha (waqti buuxa oo joogto ah) ama Korontada Shaqaalaha Dual . Ka dib markaad hesho Dibloomada waxbarashada dugsiga sare Ma waxaad tahay koronto yaqaan buuxa oo waad ka bilaabi kartaa goobta shaqada ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga.
Kala hadal halkan miisaska casharrada ee Koorsada Korantada BSO Electrical Electrical: